Uma ungumdlali zanamuhla, ubani owaphucwa wabelethwa ithuba nenkulungwane, ukubuza ukuthi uyazi ukuthi "Super Mario," "Pac-Man" futhi "Digger", lapho akunakwenzeka ukuba sithole impendulo. Futhi basola yena kule kungenzeki, ngoba idatha umdlalo ishicilelwe eside ngaphambi kokuba azalwe. Bakhumbule abadlali inveterate kuphela ababezijabulisa-ihluzo eziyisishiyagalombili futhi bacabanga ukuthi omuhle wobuciko. Yiqiniso, manje ukudalwa imidlalo ye-computer ezisetshenziswa ukusika-onqenqemeni yentuthuko kwezobuchwepheshe, kodwa lokhu akusho negate imidlalo upscale ezifana "Digger". Lesi kucishe kube manje futhi kuzoxoxwa, ngoba lo mdlalo ukhunjulwa yizigidi. Wayengomunye okungcono Eighties futhi waqhubeka e nineties. "Digger" - uphawu sonke isizukulwane imidlalo yama-computer, futhi kumelwe bazi, ngisho ngalabo abazalwa engamashumi amabili ngemuva ukubonakala iphrojekthi ekukhanyeni.
Isifinyezo "yezilwane ezimba"
Emuva ngo-1983 inkampani Australian wahlanganyela ukuthuthukiswa imidlalo yama-computer, ukhiphe okusalungiswa ukuthi wayengeyena original kakhulu futhi ukuhluka kwabanye. Njengoba ubona emva kwamaminithi ambalwa edlala isikhathi, "Digger" - umdlalo Arcade, lapho kufanele umbe phansi, esikhiqiza amagugu aphunyuke phambi kwamehlo ezilo. imidlalo Okufanayo sebededeliwe ngaphambili, kodwa "Digger" kwaba Okudlula omunye umdlalo, futhi uchaze ukuthi manje, ngemva kweminyaka engaphezu kuka amathathu, akuseyona lula kangaka. Mhlawumbe isizathu kwaba ukuthi onjiniyela wanika umdlalo ezinye izici yasekuqaleni. Mhlawumbe kungcono yokuthi ukusebenza ezibukwayo futhi umsindo abasebenzisi ihambisana bathandile ngaphezulu. Kodwa noma kunjalo, le phrojekthi ethize kunase ezazingaphambi kwayo, isibe cult, okuyinto sonke ukukhumbula kuze kube manje. "Digger" - kuyinto umdlalo umlutha futhi akavumeli uhambe, ngoba kwaba into Amazing futhi kujabulise.
Njengoba ungacabanga, lokhu term hhayi kuphela likhethe umdlalo we-computer. Kodwa uma sizohlola lo mbuzo, kuyacaca ukuthi kungani umdlalo ubizwa ngokuthi. Ngakho, yini unesithakazelo igama elithi "digger"? Icacisa ukubaluleka translation - lapha yikho kanye okudingayo ukuze kume kahle isithombe. Ngakho, igama elithi akuyona Russian - kubolekwe ngolimi lwesiNgisi, lapho mba izwi uhumusha ukuba "umbe" futhi digger, ngokulandelana, "lowo Ukuvubukula". Inguqulo enembe ku isiRashiya lapho, ngakho kwakukhona kwemali efanayo. In the game udinga ukuthatha indima uhlamvu ngubani ukumba emhlabathini ukuze uthole engcebweni, ngakho igama buyafaneleka. Kodwa leli gama unezinye futhi amanani. Ngokwesibonelo, emhlabeni wonke ukusabalala subculture yezilwane ezimba - abantu bahlola ezihlukahlukene izakhiwo komhlaba adalwe indoda. Aqondiswa imigomo ehlukene - ngenzalo okumsulwa emibonweni kukhathazeka ukuthi umasipala ungase uqale World War III. Ngo-2004, ethandwa iphephandaba "Ingxabano kanye Amaqiniso" lalibuye yashicilela isihloko esithi "Digger - liyisithunzi ebumnyameni", ositshela indlela diggerstvo sisonke, futhi isiqondiso Russian bale nhlangano ngokukhethekile. Kodwa cha thikazisa, ngoba isihloko manje - umdlalo computer.
Izimiso eziyisisekelo "Digger"
Ngakho ukuqala umdlalo, ukujwayela indima umlingiswa oqanjiwe, ngubani eliwela emhlabathini. umsebenzi wakhe - ukucinga ingcebo ukubaleka izilo. Izinga ngalinye endaweni okuyinto ayigcwalisa ngomhlabathi, futhi ungakwazi umbe ke, isibhakela eya engcebweni. "Digger" - umdlalo esakheka kancane kancane. Esikhathini emazingeni aphansi uzobe lula ngempela, njengoba isidingo ukuqoqa hhayi imigexo okungaka, futhi ezilo kuyoba kancane futhi ambalwa. Kodwa nge umsebenzi ezingeni ngalinye uzobe inkimbinkimbi, futhi une ukuba izame kakhudlwana ukuzenza wenze izinto zenzeke. Kodwa ungakwenza kanjani na? Ukuze wenze lokhu, ukubukeka olunemininingwane ethe xaxa ngesikhathi lo mdlalo Digger. Lurkmore uchaza Entela kahle impela zonke izinqubo, kodwa namanje kangcono kuyiwe Udaba sina.
Umgomo wakho oyinhloko - yezimayini ingcebo. Amagugu negolide - yilokhu abazingela. Uma ufuna ukwazi ukuthi "Digger", kudingeka uqonde ukuthi yini elindeleke kuwe in the game. namatshe ayigugu ukukhiqiza kakhulu kulula - udinga kuphela sokumba phansi bese uya iseli equkethe abanje bakhandwe ngamatshe. Nge izikhwama zegolide, konke kunzima kakhulu kangakanani - kufanele umbe nabo, kangangokuba bawa ukuphakama amaseli okungenani ezimbili. Khona-ke wavele esikhwameni, ngaphandle vysypletsya igolide, lapho ungakwazi kalula abuthele. Ekhuluma ofaka - ukuhambahamba iyiphi iseli mahhala, kodwa kudingeka ubuke eduze, ngawo uphase. Ungakwazi zokuphola buthaka yiliphi itshe noma isikhwama efanayo egolide. Le nto ungawela kuwe - futhi ayoshabalala. Ngakho awukwazi umbe nxazonke mindlessly, kungenjalo ngeke uwine - lizinga ngalinye uzodinga amacebo ayo. Ngaphezu kwalokho, uyoba liphazamisane izilo, okuyinto ingacasula mdlalo "Digger". Kuyini futhi kanjani lezi zilwane kungakuthinta kanjani? Izimpendulo zale mibuzo zingatholakala ngezansi.
At ngamunye Ezingeni ekhoneni ezilo zizalwa, ngubani uzobe uhamba kumephu niyokudla ngokushesha ngangokunokwenzeka uthinte. Ngakho le mihlangano, kuzodingeka ukuba igwenywe. Uzodinga ukuba ingahlanganyeli ezilo futhi ukuqoqa amagugu ukuqedela ezingeni ngokushesha ngangokunokwenzeka. Yiqiniso, unayo indlela ukulawula izilo - ungakwazi ukudubula kubo, kodwa udinga isikhathi esiningi ashona. Ungakhombisa futhi ukuthatha ithuba bese uzama ukusebenzisa SAPS ukwambula phansi izimbangi - uwile phezu kwabo itshe ababulale azizimbi kunawe. Nokho, kungenye indlela yokulwela izilo.
Ukubhujiswa monster ngamunye ikunika amaphuzu, okuyinto udinga ezingeni ngalinye beyolanda inombolo ethile. Uma abulale udrako ekhoneni kukhona amasha, kodwa lezi izibuko banesibopho inani lawo, futhi uma ifinyelela zero, imodi ibhonasi icushiwe. Kule modi kungalimaza ezilo, nje ngokuthinta kubo, njengoba kwakunjalo ngo-isikhathi sakhe nawe. Yiqiniso, le ndlela ilinganiselwe kakhulu isikhathi, ngakho kufanele basheshe uma ufuna ukwenza iningi ibhonasi ezingavamile.
Yiqiniso, ngesikhathi esifanele, "Digger" wadala furor, futhi emakethe imidlalo yama-computer ngokushesha yaqala ukugcwalisa nge remakes. Abakhiqizi uzamile ukuphinda impumelelo "Digger", ngoba, njengoba niyakhumbula, wayengumuntu yena uhlobo Remake. Nokho, akukho umdlalo ayikwazanga uwine enkazimulweni efanayo ngokuthi "Digger". Kukhona ukushintshwa the original umdlalo, okusenza ukusekela touch-screen noma ngokucaca okuphakeme, futhi kukhona amaphrojekthi third-party ukuthi ukubeka iqhawe emathuneni futhi wenze Zombies zako ezisemqoka isitha. Kodwa ayikho neyodwa kulezi imidlalo ningabi emhlabeni odumile, futhi ophawule wathi akumele kuqhathaniswe original.
Ngu manje "Digger" kuyinto cult umdlalo we Eighties futhi nineties, abantu khumbula le phrojekthi, kodwa kungenzeka ukuthi isizukulwane esisha wadida ozibonayo. Ngeshwa, ngisho manje ukudala amaphrojekthi afana ne "Digger" - lokhu legatsha liye eside safa, ngoba wayengasakwazi ukuhambisa ube format yesimanje. Lo mdlalo efanayo mayelana plumber Mario ziyaqhubeka zithela kuze kube namuhla, uyibeka emhlabeni ngakuthathu. A "Digger" uhlala kuphela izinkumbulo.
"Planet amagugu". Indlela ukudlula ezingeni 408 kule "Planet amagugu"
Indlela ukusetha fashion in the "Mafia 2": isitatimende